के तोकिएकै मितिमा रिलिज होलान् ‘चिसो मान्छेदेखि कबड्डी ४’ ? – Charchit Entertainment
दीपेन्द्र यतिबेला घरमै छन् । उनी भन्छन्–‘अब, त भदौ ११ मा चलचित्र रिलिज गर्न कसरी सकिएला र ? चलचित्रको काम त सकिन्छ । तर, माहोल नै नबनेसम्म त चलचित्र रिलिज गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन । अब त चलचित्र कहिले रिलिज हुन्छ भन्न सकिने अवस्था नै छैन ।’कोरोनाको पहिलो लहरले भन्दा दोश्रो लहरले पारेको असर निकै ठूलो छ । मानिसमा त्रास बढेको छ । यसैले, आम नेपालीले खोप नलगाएसम्म हलमा दर्शक फर्किने अवस्था छैन । दीपेन्द्र भन्छन्–‘अरु, क्षेत्र खुलेपनि हाम्रो क्षेत्र खुलिहाल्दैन । मनोरञ्जन क्षेत्र सबैभन्दा ढिलो खुल्ने क्षेत्र हो । यसैले, पनि चलचित्र क्षेत्र नै अब कसरी बढ्छ भन्न सकिदैन ।’
५ बर्षकी नानीले बिदेशमा भएका आफ्ना बुवालाई गीतबाट बोलाउछिन्- आजसम्म आफ्नो बुवा देखेकी छैनन् Putali
March 6, 2021 March 6, 2021 Auther